Isifiso soSondo sifumana njani kwi-Intelligence Insight
"Iphakame yothando" isimboli esenzeka kwiPlato 's Symposium . USocrates, wenza intetho ekudumiseni u- Eros , uhlaziye imfundiso yomfundisikazi, uDiotima. "I-ladder" ibonisa ukunyuka umthandi angayenza ngokukhangeka ngokwenyama kumzimba omuhle, umgangatho ophantsi, ukucinga ngeFom yeBeautiful ngokwayo.
I-Diotima ichaza izigaba kulo mgca ngokwemiqathango enjani into enhle umthandayo enomnqweno.
Umzimba omhle. Le yinqalo yokuqala, xa uthando, oluchazwe ngumnqweno wento esingenayo, kuqala luvuke ngumbono ngamnye.
Yonke imizimba emihle. Ngokwemfundiso ephakamileyo yePlato, zonke izidumbu ezintle zixubusha into efanayo, into ekugqibeleni umthandi uya kuqonda. Xa eqonda oku, uhamba ngaphaya komnqweno womzimba othile.
Imiphefumlo emihle. Emva koko, umthandi uyazi ukuba ubuhle bokomoya kunye nokuziphatha bubaluleke ngaphezu kobuhle bokwenyama. Ngoko uya kukhangela uhlobo lokusebenzisana nabalinganiswa abaza kumnceda abe ngumntu ongcono.
Imithetho emihle namaziko. Ezi zidalwe ngabantu abalungileyo (imiphefumlo emihle) kunye neemeko ezikhuthaza ubuhle bokuziphatha.
Ubuhle bolwazi. Umthandi unika ingqwalasela kuzo zonke iintlobo zolwazi, kodwa ngokukodwa, ekupheleni kokuqonda kwefilosofi. (Nangona i sizathu salo mbuzo asichazwanga, mhlawumbi kuba ubulumko befilosofi yiyinto eyenza imithetho nemigangatho emihle.)
Ubuhle ngokwabo-oko kukuthi, ifomu leMnandi. Oku kuchazwa ngokuthi "ubuhle obungunaphakade obungayi kuza okanye buhamba, engabonakaliyo neentyantyambo." Yona yinto ebalulekileyo yobuhle, "ukuzinzileyo kunye ngokwalo ubunye obungunaphakade." Yonke into enhle imnandi kuba ukuxhamla kwayo kule Fomu. Umthandi oye wenyuka kwinqanaba uthabatha ifomu yeBeautiful ngohlobo lombono okanye isityhilelo, kungekhona ngamazwi okanye ngendlela ezinye iindidi zolwazi oluqhelekileyo ziyaziwayo.
U-Diotima utshela uSocrates ukuba ukuba ufikelele kumgangatho ophezulu kwinqanaba kwaye ucinga ngeFom yeBeautiful, akayi kuphinda akholwe yizinto ezikhangayo zolutsha oluhle. Akukho nto eyenza ubomi buzuze ngakumbi ubomi kunokuba lunandipha lohlobo lwemibono. Ngenxa yokuba ifomu lobuhle liphelile, liya kubakhuthaza ubuhle obugqibeleleyo kulabo bacinga ngako.
Le ngxelo yomlinganiselo wothando ngumthombo wesazi esaziwayo "sothando lukaPlaton," oko kuthetha ukuthandana nothando olungabonakali ngobudlelwane bezesondo. Inkcazo yokunyuka ingaqwalaselwa njenge-akhawunti yenkqutyana, inqubo yokuguqula uhlobo oluthile lomfutho kwelinye, ngokuqhelekileyo, elibhekwa njenge "phezulu" okanye ngaphezulu. Kulo mzekelo, umnqweno wesini somzimba omhle uba mncinci ube ngumnqweno wokuqonda nokuqonda.
Osama Bin Laden Iikhathuni
Iifowuni Zokufa: Umbulali Inombolo yefowuni Izilumkiso zoMxwayiso
Yayiyintoni Umlawuli WaseRoma?
7 Iimpendulo ZeBhayibhile Zokubulela Ukubonisa Uxabiso Lakho